Barakacayaal ka soo barakacay Baay iyo Bakool oo Muqdisho ku qulqulaya – SBC
Barakacayaal ka soo barakacay Baay iyo Bakool oo Muqdisho ku qulqulaya
Wax amaalinba maalinta ka dambeysa soogaaraya magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya dad ka soo barakacaya gobolada qaar ee dalka siiba gobolada Baay iyo Bakool kuwaas oo ka soo baxsanaya Abaar iyo colaado ka jira goobahaasi.
Maanta ayaa magaalada waxaa soogaaray dad ku dhow dhow 500 oo Qof kuwaas oo lagu soo dhaweeyay deegaano ka mid ah Muqdisho sida Degmada Xamarweyne iyo Waaberi oo ka tirsan gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha Degmada Xamaweyne oo Markii ugu horeysay ka hadlay dadkan Barakacayaasha ah ayaa waxa uu sheegay in muhiimada ugu horeysa ay tahay in dadkan la taakuleeyo sidoo kalena lala soo gaaro gargaar cunto ah.
Dadkan oo faramaran ayaa sidoo kale waxaysan heysan hoy ay ka degaan magaalada Muqdisho iyagoona mar ay la hadlayeen xafiiska SBC ee Muqdisho sheegay in abaar ba’an oo haleeshay ay hanti iyo xoolo la’aanba ku dhigtay deegaanadii ay ka yimaadeen, waxana ay dadkani u muuqdeen kuwo tabar yar oo aan awoodi karin in nolol maalmeedkooda ay ka soo dhacsadaan magaalada Muqdisho .
Magaalada Muqdisho oo ay ka jiraan dagaalo islamarkaana ay horay isaga barakaceen dadkii deegaanka ku lahaa ayaa ay ku soo qul qulayaan dadkan iyagoona ku talagalya xaalka ka jira meeshaas iyo sida ay ugu noolaan lahaayeen waxaana ay dadkani dalbanayaan gar gaar deg deg ah oo sida ugu dhaqsiyaha badan loola soo gaaro .
Gudoomiyaha Degmada Waaberi ee DKMG ah ayaa dhankiisa Baaq u jeediyay Hay’adaha samafalka ganacsatada iyo cid alaala cidii wax u qabankarta dadkan Tabaaleysan in ay la soo gaaraan gar gaar deg ah ah taasi oo ah muhiimada koobaan ee dadkani ay u baahanyihiin.